Amagqwetha aMazwe ngaMandla eNetherlands - Law & More
Ngokomgaqo, umthetho wamandla ubalulekile xa amandla ethengiwe, enikezelwa okanye eveliswa. Ababoneleli bamandla kunye neenkampani kunye nabantu abazimeleyo badlala indima kule nto. Law & MoreAmagqwetha abeka iliso elibukhali kuzo zonke izinto ezenzekayo kumthetho wezamandla, kubandakanya nezinto ezenzekayo kwicandelo lokuvelisa amandla azinzileyo.
UKUJONGA UMLILO WOKUGQIBELA?
> Umthetho omtsha wamandla
> Umthetho kwicandelo labathengisi bamandla
> Ukuthengisa izinto ezikhutshiweyo kunye nesitifiketi sokurhweba
Iingcali zethu zinolungelelwaniso olubanzi, njengoko zigxile kuzo zonke iintlobo zamandla. Ke ioyile, igesi yemvelo, umbane, i-biomass kunye nomoya kunye namandla elanga. Ngenxa yokuqhelaniswa ngokubanzi, abathengi bethu abathengisi kunye nabavelisi kunye nabathengi, abatyali mali kunye nababoneleli bempahla kunye neenkonzo. Okokugqibela, sikwasebenza kwicandelo lokubonelela ngezinto eziza kusetyenziswa kwiindawo zokwenza imveliso, sigubungela iimveliso ezinjengomphunga kunye namanzi oxutywe namanzi. Ke, ngaba ufuna ingcali kwicandelo lomthetho wamandla? Law & More ukuhambisa ezi nkonzo zilandelayo zombini i-Eindhoven kunye neAmsterdam:
• Ukuzoba ubushushu kunye nezivumelwano zamandla;
Ukubonelela ngeengcebiso ngokubhekisele kuthengiso kunye nokuthengiswa kwamandla;
Ukubonelela ngengcebiso malunga nokuhambelana nomthetho wamandla kunye nezivumelwano zamandla;
Ukubonelela ngengcebiso malunga nokuzoba umgaqo-nkqubo wamandla ozinzileyo;
• Ukuzoba iiplani zokwenza amandla ngendlela efanelekileyo;
Ukufaka isicelo seempepha-mvume kunye nokuxolelwa;
Ukubonelela ngengcebiso kuthengiso lwezinto ezikhutshwayo kunye nokuthengiswa kwezitifiketi.
ukuba negqwetha elithi
ihlala ilungile kum,
Umthetho omtsha wamandla
Umthetho wamandla udlala indima ebalulekileyo kuluntu lwanamhlanje, njengoko singekhe senze ngaphandle kombane, ukukhanya kunye nobushushu. Uninzi lwamandla lusenziwa zizibaso ezifana neoyile kunye negesi, kodwa ezi fuel azilunganga kwimeko yendalo esingqongileyo kwaye, ukongeza, ziyaphela. Ukuqinisekisa ukuba asipheli mandla nokuphucula okusingqongileyo, ngoku siza kusebenzisa eminye imithombo yamandla enjengamanzi, umoya, ukukhanya kwelanga kunye ne-biogas. Le mithombo yamandla lixesha elizayo, kuba ayinabungozi kwindalo esingqongileyo kwaye ayinakuphela.
Ubungcali bethu kumthetho wamandla
Sigxile kumthetho wamandla ojolise emoyeni nakumandla elanga
Yomibini le mithetho yamaDatshi kunye neyaseYurophu isebenza kumthetho wokusingqongileyo. Masazise kwaye sikucebise
Amalungelo okukhupha / urhwebo lokuphuma
Ngaba ujonge ingcali kwezorhwebo lokuzikhupha? Siyavuya ukukunceda ngakumbi!
Ngaba ujongene namandla ombane? Iingcali zethu ziyavuya ukukunceda
Ukuqinisekisa ukuba amandla kunye nomgaqo-nkqubo wemozulu uyalandelwa, iNetherlands igqibe isiVumelwano soMbane sokuKhula okuzinzileyo. Injongo yesi sivumelwano kukuba iNetherlands ibaleke ngokupheleleyo kumandla azinzileyo ngonyaka wama-2050. Isivumelwano se-Energy siqukethe iinjongo ezahlukeneyo zeenkampani ezifuna ukuba zonge amandla. Ukongeza, urhulumente waseDatshi ungene kwizivumelwano zexesha elide nenani elikhulu lamacandelo okubeka esweni ukuphuculwa kokusebenza kwamandla. Iinkampani eziyinxalenye yezi zivumelwano ziya kuba neengenelo ezininzi: ziya kuxhamla kukongiwa kweendleko, iinkqubo ezintsha zokuyila kunye nomfanekiso ozinzileyo. Kodwa kukwakhona uxanduva olunxulumene nezivumelwano zeminyaka emininzi. Ezi zivumelwano zinzima kwaye uninzi lwemithetho luyenziwa. Ngaba inkampani yakho iyachaphazeleka yimigaqo emitsha? Inkxaso elungileyo esemthethweni ibalulekile, ukuze wazi apho umi khona. Nceda unxibelelane Law & More kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.
Umthetho kwicandelo labathengisi bamandla
Ngaba kufuneka ujamelane nokuthengwa okanye ukuthengiswa kwamandla? Emva koko uyazi ukuba ungathenga umbane ngapha nangaphezulu kwikhawuntala kunye nothengiso lwesitokhwe. Kuba nge-over-the-counter indlela enye yamaqela inokuhamba ibhengezwa, inkxaso yomthetho ibaluleke kakhulu. Kukwabalulekile ukuba izivumelwano ezicacileyo zenziwe ukuze elinye iqela lifezekise uxanduva kwaye umthengisi angalahlekelwa lilahleko. Law & More inika inkxaso kule misebenzi ukuze ungajonganga naluphi na uloyiko.
Kwiimeko ezininzi, ukubonelelwa kombane kunye negesi kwenzeka ngenethiwekhi yombane okanye igesi. Abantu okanye iinkampani ezibonelela amandla kwabanye abathengi zinyanzelekile ukuba zityumbe umphathi wenethiwekhi. Nangona kunjalo, kukho okungafaniyo kulo mgaqo: ukuba, umzekelo, usebenzisa inkqubo yokuhambisa evaliweyo okanye umgca othe ngqo, uxanduva lokuqesha umsebenzisi wenethiwekhi alisebenzi. Inkqubo yokuhambisa evaliweyo yinethiwekhi yeshishini enomda ngokwendawo kwaye inokuba nenombolo ethile yabathengi. Abanini benkqubo evaliweyo yokuhambisa banokufaka isicelo sokuxolelwa kwisibophelelo sokuyila umsebenzisi wenethiwekhi. Umgca othe ngqo ukhona xa umgca wombane okanye umbhobho wegesi uxhuma umvelisi wamandla ngqo kumsebenzisi wamandla. Umgca othe ngqo awuyonxalenye yenethiwekhi, ke akukho sinyanzelo sokuqesha umsebenzisi wenethiwekhi kule meko.
Ukuba uyinxalenye yomthengisi wamandla, kubalulekile kuwe ukuba uqonde ukuba ingaba kukho inkqubo yokuhambisa evaliweyo okanye umgca ngqo. Kungenxa yokuba amalungelo awahlukeneyo kunye nezibophelelo zidlala indima kuzo zombini iindlela zonikezo. Nangona kunjalo, kukho ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele. Umzekelo, abathengisi bamandla banokufuna ilayisensi yokubonelela ngegesi kunye nombane kubathengi abancinci. Ukongeza, ababoneleli bamandla kufuneka bathathele ingqalelo imimiselo evela kwi-Heat Act, ethi ichaphazele ukugqitywa kwezivumelwano zobushushu.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo okanye ukungaqiniseki malunga nomthetho wamandla kubaxhasi bamandla? Emva koko fowunela iingcali ze Law & More. Sinikezela ngenkxaso yomthetho kwiinkampani nakubathengi abajongana negesi nombane. Nokuba wenza isicelo sephepha-mvume, usenza ikhontrakthi yamandla okanye uthatha inxaxheba kurhwebo lwamandla, iingcali zethu zikwinkonzo yakho.
Ukuthengisa izinto ezikhutshiweyo kunye nesitifiketi sokurhweba
Njengenkampani, kuya kufuneka ujongane nokhuseleko lokuthengisa okanye ukuhambisa izatifikethi? Kuya kufuneka ubale ukuba ingakanani CO2 oyikhuphayo kunyaka ngamnye, ukuze ufumane inani elifanelekileyo lokuphuma. Ukuba kunjalo ukuba ukhuphe ngaphezulu, kuba ukuthengiswa kwemveliso yakho kwandisiwe, uyakufuna amalungelo ongezelelweyo angakumbi. Ukuba ufuna isixa esikhulu sombane, ungathatha inxaxheba kurhwebo lwesatifikethi. Kuzo zombini iimeko, Law & MoreAmagqwetha aya kuza aluncedo kuwe. Iingcali zethu zijolise kurhwebo lokukhutshwa kunye nokuthengisa izatifikethi kwaye uyazi indlela yokukunceda xa unengxaki kule nto. Ke, ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga namalungelo okukhupha? Ngaba uyafuna ukufaka isicelo semvume yokukhutshwa? Okanye ngaba ufuna ingcebiso kurhwebo lokukhutshwa okanye ekuthengiseni izatifikethi? Nceda unxibelelane namagqwetha ku Law & More.